Ọrịre ama ama zuru ụwa ọnụ na mbelata 7% na 2016 | Gam akporosis
Mgbe ọtụtụ ndị na-ekwu na anyị na-ezute a okea ahia N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke na-ere ekwentị na teknụzụ nke ọ dị mfe iji gosipụta onwe ya na ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ na-egosi na-egosi ihe ekwuru na ahịa ndị tozuru etozu ebe enwere ụfọdụ ihe iji chọta pasent ndị a nke ụfọdụ ụlọ ọrụ.
Eziokwu bụ na anyị agakwaghị achọta ọnụọgụ abụọ ahụ nke percentages na mmụba nke ahịa ahịa n'ụwa niile, ọ bụkwa ihe Gartner n'onwe ya gosipụtara, na-ekwu na uto ga-abụ pasent 7 maka afọ a. N'afọ gara aga ahịa ahụ toro na 14,4% kwụ ọtọ, yabụ na ọnụ ọgụgụ ahụ egbutula ọkara ma ọ bụrụ na Gartner ziri ezi. Ọzọ, GfK, ebuola amụma otu ọnụ ọgụgụ na ọnwa nke Machị, yabụ na anyị nwere abụọ nwere ọnụ ọgụgụ.
Nwanyị Roberta Cozza, Onye isi oche nke Gartner, achọtala ọtụtụ ihe kpatara ọdịda a, mana nke kachasị rụọ ọrụ bụ usoro mmeghari ohuru nke bawanye iji ruo afọ 2 na ọkara, ihe na-agaghị agbanwe maka afọ ise sochirinụ. Ewezuga eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-emepụta na-ebupụta n'ahịa ndị na-apụta ma na-emepe emepe akụ na ụba iji gbalịa ịga n'ihu na ọnụ ọgụgụ dị mma.
A na-elekwa anya n'Africa ahịa iji bulie ahịa ndị ahụ, dịka ọ dị na Sub-Sahara Africa ebe ahịa ama ama gafere ahịa ekwentị na nke mbụ n'afọ gara aga. Ka ọ dị ugbu a, India na China na-abụ ahịa abụọ na-aga nke ọma. A na-atụ anya India inwe ahịa 139 nde n'onwe ya n'afọ a, nke pụtara ogo uto nke 29,5%. Onu ogugu di egwu n'oge uwa nile na mpaghara achota uzo di ala dika nke uwa 7% nke emeputara maka afo 2016 a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkesa a na - enweta n’ụwa nile na - eto naanị 7% na 2016
Kpọọ ọkacha mmasị gị YouTube music si mkpọchi ihuenyo na Stream ngwa